सिन्धुपाल्चोक, चैातारा र तातोपानी | manka kura
« गाउँको कथा
फेसवुकले मनाएको जन्मदिन »
सिन्धुपाल्चोक, चैातारा र तातोपानी
चैातारा पुगेपछि चैातारा खोज्दा नभेटिएपछि थाहा पाइयो अहिले कृस्न मन्दिर रहेको स्थानमा पहिले चैातारा थियो रे , कवि इश्वरचन्द्र घिमिरेले चैातारामा चैातारा नदेखेपछि लेखेका रहेछन् , चैातारामा चैातारा खोर्इ ? थकार्इ कता मारैा ,कि म एउटा पिपलडाली टुंडिखेलमा सारैां ।
काठमाडैावाट जम्मा ८४ किलोमिटर पर रहेको रमणीय सुन्दर चैातारा घुम्ने रहर गर्दै हामी भाइ कुवेर राउतको अामन्त्रणलार्इ स्वीकारेर त्यहां पुग्छैाँ । वसको यात्रामा झन्डै ५ घंटा , माइक्रोवसको यात्रा दुर्इ घंटा चानचूनमा पुगिने रहेछ । वित्दो केही थिएन हामी वसमै यात्रा गरेर पुग्यैा ।
हामी चैातारा पुग्दा वजारमै रहेको जिल्ला हुलाक कार्यालय अगाडी रहेको यो पुरानो घर एक दिन अघिदेखि भत्काउन थालिएको रहेछ । भोलीपल्ट करिव दुर्इतल्ला भत्किसकेको थियो । सायद यो ठाउंमा अहिले नया भवन वनिरहेको होला ।
चैाताराजांदा इन्द्रावती नदीपारी वस विसैानीमा रोकियैा । त्यहाँ महिला पुरूषका लागि शैाचालयको व्यवस्था छ । यात्राको क्रममा सवैले भोग्नुपर्ने समस्याको समाधान त्यहां सहज किसिमले विसाउन सकिन्छ । वस रोकिउन्जेल मैले केही फोटो खिंचे र नजिकै रहेको पसलमा इन्द्रावतीको भनेर वेचिने माछा खायैा । वसविसैानीको यो फोटो ।
जिल्लको भैागोलिक अवस्था वुझ्दा तीनवटा निर्वाचन क्षेत्र,तेह्र इलाका, र ७९ गाविस रहेको पाइन्छ । केही समय अघि ४ गाविस मिलाएर चैातारा नगरपालिका घोषणा भएको छ । गाभिएका ४ गाविस कुभिन्डे,इर्खु,पिपलडाँडा र सदरमुकाम रहेको चैातारा गाविस । नगरपालिकाको काम भने खासै अघि वढेको सुनिएन । खानेपानी वजारभन्दा उत्तरतर्फ रहेकेा खेालावाट ल्याइएको रहेछ । पानी अति सुद्ध र सफा अनि मिठो रहेछ । हालसम्म उपभोक्ता समितिलेनै खानेपानी संचालन गरेको रहेछ ।
वजारको सिरानमा रहेको टुंडिखेलवाट देखिएको सुन्दर हिमाल । विहान उठेदेखि उत्तर दक्षिणतिर देखिने हिमाल हेरेर वसीरहन पाउदा काठमाडैाको धुंवा धुलो र फोहर सवै विर्सिने रैछ । वजारका सवै घरका झयाल र छतवाट झलमल देखिने सेतो हिउं ढिस्कोले सवैको मन हरदिन प्रफुलित तुल्याउंछ । यो तलको फोटोले कतैवाट छेकवार नरहेको टुंडिखेलमा वस्दाको अानन्द दर्शाउँछ ।
राजधानी काठमाडैावाट उत्तर पूर्व रहेको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चैातारा ’round गायक प्रेमध्वज,कलाकार कृस्न मल्ल र मानवअिधकारवादी गैारी प्रधानको थात थलो पनि यतै रहेछ । वजारमा नेवारहरूको वस्ती वाक्लो छ ।वजार साँङुरिदै छ ।
दोलखा वजारवाट उकालो लाग्दै २४ किमि पार गरेर चैातारा पुग्नु अघि वाटोमा सांगाचोक र इर्खु वजार भेटिए । यी दुवै ठाउंले वजारको रूप लिँदै गरेको देखिन्छ ।
काठमाडैामा रहेर जागिर खान नपाउनेहरू प्राय नजिकको जिल्लाको रूपमा रहेको यो चैातारा रूचाउंछन् । त्यसैले हरेक शुक्रवार शनिवार त वजार सुन्य नै लाग्दो रहेछ । शुक्रवार खाली हुंदै गरेको चैातारा अाइतवार नभै फेरी चहल पहल शुरू नहुंदो रहेछ ।
तलको मन्दिर पुरानो वजारमा रहेको भीमेश्वरको मन्दिर हो । गैाराती भिमेश्वर मन्दीरमा कार्तिक पूर्णीमाको भोलीपल्ट लाग्ने ठूलो मेलामा यस मन्दीरवाट देवता लगी
नदीनाला, ताल पोखरी को हिसावले धनी रहेको सिन्धुपाल्चोकमा इन्द्रावती, भोटेकोशी, सुनकोशी, वलेफी, मेलम्ची, सिन्धुखोला, गोहो खोला , लमुखोला, वाफलखोला, हाँडीखोला, महादेवखोला, तोथली खोला, सिपाखोला,लमुखोला,अादि साना ठुना नदीहरू रहेका छन् । यी खोला नालाहरू पर्यटकिय हिसावले पनि महत्वपूर्ण रहेका छन् । राज्यको सोच पुग्न सके ।
अति कलात्मक देखिने पुरानो वजारमा रहेको श्रीकृस्नको मन्दिर ।
यही जिल्लामा रहेका पांचपोखरी, भैरवकुन्ड, गुम्वा ताल, सूर्यकुन्ड, नैालिंग कुन्ड, धुप कुन्ड, गुग्मु ताल, अादि ताल र कुन्डहरू रहेका छन्र । यी सवै धार्मिक तथा पर्यटकिय हिसावले पनि महत्वपूणार् रूपमा रहेका छन्र ।
चैातारा वजारवाट झन्डै एक घंटामा पुगिने गैाराती भिमेश्वर मन्दिरतिर हामी विहानै लाग्यैा । मोटरवाटो छोडेर उकालो लाग्नु पर्ने ठाउंमा रहेको यो गाउँ विहानीको घाममा निकै खुलेको देखिन्थ्यो ।
नेपालमा हेर्दापो यति पानी छ, उती नदी नाला छ भन्ने छ । तर के गर्नु लासामा सुन छ कानमेरो वुच्चै भने झैं ।वजारमा धारामा पानी अाएको देखिए पनि वजार माथि त उस्तै सकस रहेछ । वाटामा भेटिएका यी दाजु दुर्इवटा पानीले भरीएको गाग्री वोकेर पानी लाँदै गरेको दुख देख्दा अाफुले काठमाडैामा पानीको यो भन्दा पनि दुख खेपेको संझे । जे अाए पनि खै, कहिल्यै जनताका लागि केही भएन भनेर यीनले हामीलार्इ व्यंग गरे ।
हामी रमाउंदै, रमाउंदै हिमालका फोटो अाफैभित्र समाहित गर्दै अघि वढ्छैा ।हिमालले किन होला यसरी हामीलार्इ तानेको ,किन मन्त्रमुग्ध पारेको अाफैलाइ थाहा छैन । जे होस हिमाल देखिने ठाउं, र हिमालको हिउं मलाइर् असाध्यै प्यारो लाग्छ । अर्कोपनि त्यस्तै हिमालको फोटो हेरैा न है ।
हिमाल पछि वाटामा भेटीएका पहाडका हाम्रा सुन्दरी भाइ वैनीको फोटो पनि कम छैन ।
उचार्इ ,समथल र शान्त लोभलाग्दो वातावरण रहेको स्थानमा रहेको गेोराती भिमेश्वर मन्दीर । जहाँ कार्तिक पूर्णीमाको भोलीपल्ट ठूलो जात्रा लाग्दो रहेछ ।
गेोराती भिमेश्वर मन्दीरमा भाकल पूजाको लागि लाइनमा रहेकी स्थानीय युवती ।वहिनीको के भाकल हो नी भनेर हामीले सोधनी गर्दा , भाकल वताउन हुन्न भनेर हांसिन् ।
मन्दिरको पछाडीपटृी घरमा हामी चिया खाइ रहंदा भेटिएकी सुन्दरी भाइ वैनीको फोटो खिच्दै गर्दा मन्दिरमा भाकल पूजा गरे पछि मनोकामना पूर्ण हुन्छ भन्ने विश्वासमा अघि अाफैले कतिमायाले वोकेको रातो भाले को टाउको उतै चढाएर मन्दिरको पछाडीवाट फर्कदै गरेकी तीनै युवती ।
चेोतारामा रहेका चेोतारा अस्पताल, चेोतारा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वजारमै रहेको जेल,अनि वजारको सुन्दर ठाउंमा रहेको हुलाक अादी कार्यालयहरू धमाधम नयाँ ढाँचामा वन्दै छन्र । तलको चेोतारा अस्पताल
नयाँ वन्दै गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय
चेोताराको हाम्रो वसाइ रमाइलै भयो । शनिवार विहान हामीले चेोतारा वजार छोड्ने निधो भयो । तातोपानी र काठमाडेोसम्म फर्कने गाडी मिलेकोले हाम्रो अर्को एकदिने घुमार्इ झनै रमाइलो हुने देखियो ।
चेोतारामा वस्दा भाइ लगायत हुलाकका हाम्रा अति मिलनसार ,रमाइला र मेहनतिला साथीको स्नेहले चेोताराको हाम्रो वसार्इ र घुमाइ रमाइलै रहे । अव वांकी तातोपानी र छिमेकी मुलुक खासासम्मको यात्रा विवरणा अर्को व्लगमा राख्छु । यसका लागि मलाइ विजुली नानीले यही भनेकी छन् । ल त अरू व्लग जस्तै यसलाइ पनि मनपराइ दिनु हुने छ भन्ने लागेको छ । जय व्लग ।
This entry was posted on मार्च 10, 2012 at 3:51 बेलुका and is filed under वर्गविहीन.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
3 Responses to “सिन्धुपाल्चोक, चैातारा र तातोपानी”
मार्च 13, 2012 मा 1:01 बेलुका | जवाफ फर्काउनुहोस्
मार्च 19, 2012 मा 9:27 बिहान | जवाफ फर्काउनुहोस्
व्लग हेरी कमेन्टगरी दिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद ।
सेप्टेम्बर 4, 2012 मा 12:13 बेलुका | जवाफ फर्काउनुहोस्
राम्रो ब्लॉग ! पठनीय ………